nRelate Pbawanye peeji nke obula site na 9.6%. | Martech Zone
nRelate Increbawanye peeji nke obula site na 9.6%.
Tọzdee, Nọvemba 17, 2011 Tọzdee, Nọvemba 17, 2011 Douglas Karr
Anyị enweela ọganihu buru ibu Martech Zone ọnwa ole na ole gara aga. Ndi bekee juo anyi udiri ihe a ma ha abughi nke obula. O meela ka ị na-arụsi ọrụ ike, na-eme ka ọdịnaya anyị bụrụ ihe kacha mkpa kwa ụbọchị. Anyị edeela nke ọma, edere ọtụtụ oge, kesara n'ọtụtụ isiokwu, ma bulie ọdịnaya ahụ nke ọma karị - ọkachasị site na netwọkụ mmekọrịta.
N'ezie, ọchụchọ na-achịkwa dị ka isi mmalite # 1 nke saịtị a ruo ọnwa ole na ole gara aga. Anọ m na-eji ọtụtụ awa na ọtụtụ awa tweaking saịtị ahụ ma na-akwalite ya iji nweta sentimita ole na ole. Ozugbo m tinyere otu mgbalị ahụ mma ọdịnaya na nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, sentimita ndị ahụ ghọrọ ogige. Nọvemba ga-abụ ọnwa kacha mma anyị ... anyị gafere 100,000 nleta!
Otu tweak anyị mere nke nyeworo aka bụ ditching anyị ihe mgbakwunye ọdịnaya metụtara ochie maka ohuru si Ntughari. nRelate anaghị adabere na WordPress 'ọchụchọ algorithms - ha na-arigharị na saịtị gị ma depụta ọdịnaya ahụ n'onwe ha. Ha na egosiputa ọdịnaya n’ime ihe onyonyo mara mma n’ofe ibe ahụ.
Enwere m ike na ụfọdụ ndị ahịa anyị na itinye ihe oyiyi na post ha ga-eme ka ntinye aka na peeji a. Ngwaọrụ a gosipụtara ihe m kwuru. Peeji nke ọ bụla eleta bụ 9.6% kemgbe ịwụnye mgbakwunye. N'eziokwu ha nwere ike ịbụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ gụnyere, mana enweghị m ntụkwasị obi na usoro ọ bụla ọzọ anyị zipụrụ na-elekwasị anya na ịbawanye ọnụ ọgụgụ peeji ndị a gara.
Ọ mara ezigbo mma folks… ndị mmadụ nwere mmasị na onyonyo, ọ bụghị ederede!
Uru na ROI sitere na ọgbakọ
Etinyekwala Email na Azụ Azụ!
Nov 18, 2011 na 10:36 AM
Ekwesịrị m ịgbakwunye na oge anyị na saịtị ahụ ruru ihe ruru otu ego!